ရိုဟင်ဂျာ တွင်းအနှိုက်မှားတာမှာ အသက်ဆက်ချင်ရင် ရခိုင်ဆိုးအဖွဲ့တို့ ၉၆၉ တို့ကို ရဲရဲကြီး ခုတ်ဖြတ်ပြစ်မှရမယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Remarks by President Obama After Bilateral Meeting with President Thein Sein of Burma
သောနုထ္ထိုလ်မုဆိုး သင်္ကန်း ဆောင်ထားတာ ဘုရားလောင်းဆန္ဒန်ဆင်မင်း ကို သတ်ဖို့ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ အချက်ကျကျငြင်းပါလေ »
ရိုဟင်ဂျာ တွင်းအနှိုက်မှားတာမှာ အသက်ဆက်ချင်ရင် ရခိုင်ဆိုးအဖွဲ့တို့ ၉၆၉ တို့ကို ရဲရဲကြီး ခုတ်ဖြတ်ပြစ်မှရမယ်
ကချင် လူငယ်လေး တောထဲ ဖါးရှာ ငါး ရှာနဲ့
တွင်းနှိုက်မှားတာ လက်ညှိုး မြွေကိုက်ခံရရော။
သူက ချက်ချင်း ခါးက ဓါးဖြုတ် လက်ညှိုးကို လဲနေတဲ့သစ်ပင်ပေါ်တင် ခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ဘေးမှာ သူသိတဲ့ဆေးရွက်ပင်တွေရှာ
ခုရိုဟင်ဂျာ တွင်းအနှိုက်မှားတာမှာ အသက်ဆက်ချင်ရင်
ရခိုင်ဆိုးအဖွဲ့တို့ ၉၆၉ တို့ကို ရဲရဲကြီး ခုတ်ဖြတ်ပြစ်မှရမယ်
အင်း. . . ကရင်ဒေသ စစ်ရာဇဝတ်မှု့ မြွေ
ကချင်ဒေသ စစ်ရာဇဝတ်မှု့မြွေ တို့ကိုက်ရင်လည်း
အချိန်ဆွဲတာနဲ့ အဆိပ်က ပြန့်တော့မှာ။
Tun Mahathir also used to say: If cancer of extremities, we need to do proper AMPUTATION or radical procedures. IF not we would pay the price with our life…See Angelina Jolie even done BILATERAL MASTECTOMY (cut off her breasts) even B4cancer because she had the gene of possible Cancer……@
Read all here in Wikipedia
But…what to do… In Buerger’s disease, even when we advise the patients that IF THEY FAIL TO CUT OFF (the habit of smoking) cigarettes, they may need to cut off their legs…some are stubborn and continue to smoke. @ Wikipedia
And in the Diabetes patients with Infection of the legs (Acute Osteomyelitis) some patients resists on cutting off their legs (Amputation) leading to the infection spreading the whole body (Septicaemia) and unnecessary death.Reference: Treating Diabetic Foot Osteomyelitis Primarily With Surgery or Antibiotics: Have We Answered the Question?
This entry was posted on November 16, 2014 at 8:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.